Tian’ny Vondrona Tanora Ao Amin’ny Parlemanta Rosiana Hirona Kokoa Amin’ny Fitiavan-Tanindrazana Ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2017 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, Français, polski, English
Sary: Pixabay, naparitak'i Kevin Rothrock
Ho tonga any Rosia amin'io volana ambony io (Martsa) ilay fanentanana vaovao mitavozavoza tarihin'ny vondron'ny tanoran'ny governemanta antsoina hoe “Virtual Front” (Mandatehezana Virtoaly), izay mikatsaka ny hanamboatra ny Wikipedia-n'i Rosia hirona kokoa amin'ny “fahamarinana sy ny fitiavan-tanindrazana.”
Avy amin'ny Parlemantan'ny tanora ao amin'ny Domàm-panjakana ( fikambanana natsangan'i Vladmir Putin tamin'ny fotoam-piasany voalohany mba hanairana ny fanirian'ny tanora ho liana amin'ny asan'ny mpanao lalàna) ilay hevitra mifono paikady, satria tsy ampy fampahafantarana tsara momba ny ” tantara Rosiana, ny razamben'ny rosiana, ary ireo Rosiana mpitarika” ao amin'ny Wikipedia amin'izao fotoana izao.
Ilaina ny hahalalan'ireo Rosiana tanora ny momba ireny tantara ireny, hoy i Maria Voropayeva, filoha lefitry Parlemantan'ny tanora, mba hitaizana ny fitiavan-tanindrazana rosiana. Lazainy ihany koa fa ankasitrahany ny fanafoanana ireo votoaty sasany hita ao amin'ny Wikipedia amin'izao fotoana izao, amin'ny fanamafisana fa tsy tokony haseho ao amin'ilay haban-tranonkala ireo fitanisàna avy amin'ireo mahery fihetsika na ireo mpanohitra.
Nandritra ny taona lasa, dia efa nitarika ny “I Take Pride in Russia Every Day” (Hireharehako isan'andro i Rosia), tetikasa iray an'ny Parlemantan'ny Tanora, i Voropayeva, tetikasa izay nanaparitaka lahatsary maro tao amin'ny YouTube, lahatsary fohy maneho fitiavan-tanindrazana avy amin'ireo tanora avy any amin'ny tanàna manerana ny firenena ny sasany. Mitovy ny fisainana nanaovana ireo lahatsary ireo sy ny Mandatehezana Virtoaly, famporisihina ny Rosiana mba hiady amin'ny tontolo feno fankahalàna sy manao tsinontsinona ny fireneny.
“Isan'andro vaky izao, feno fako ao amin'ny aterineto,” hoy ny vehivavy iray miteny manoloana ny fakàntsary ao amin'ilay lahatsary malaza be nozarain'ny “I Take Pride in Russia Every Day.” I Rosia no mpihetraketraka. Isika rehetra no mpanafika. Rahonan'izy ireo isika ! Ry vahoaka, fa misy inona ?”
“Nahoana no misy manan-jò hihomehy amin'ny fahoriantsika ? sa tsy voafetra ny fifaninanana mitady vola? ” hoy ny fanontaniana kitanontanon'ilay vehivavy iray, toy ny milaza ny Metrojet Flight 9268, ilay fiaramanidina rosiana nianjera tany Egypta tamin'ny Oktobra 2015.
“Izay manatona anay amin'ny sabatra dia ho fatin'ny sabatra,” hoy ilay tovolahy iray tamim-pahamatorana.
Eo anatrehan'ny fandrahonan'ny fako ao amin'ny aterineto, ireo hanihany momba ny fijaliana, ary ny sabatra dia lazain'ny Parlemantan'ny Tanora fa hamaly izy amin'ny fanentanana iray hanampiana lahatsoratra 10.000 ao amin'ny Wikipedia Rosiana.
Rehefa nandre ny momba ny Mandatehezana Virtoaly i Rustam Nuryev, iray amin'ny tomponandraikitry ny Wikimedia any Rosia, dia nametra-panontaniana tao amin'ny Facebook, ” Fa maninona no lahatsoratra vitsy kely ?”
Raha ny marina, dia 1,3 tapitrisa mahery ny isan'ny toko ao amin'ny Wikipedia Rosiana amin'izao fotoana izao, ary maherin'ny 2.000 no nivoaka ho azy tsy fanta-pihaviana, tamin'ny herinandro nanambaràna ny Mandatehezana Virtoaly.
Raha vao miasa tsara ny Mandatehezana Virtoaly amin'ny volana Martsa, dia tsy ho hetsika sosialy marindrano fotsiny, ny fandraisana anjara dia midika fa aseho ireo filànkevim-pitantànana ahitàna mpampianatra am-polony sy mpanamarina ny zava-misy manerana ny firenena ilay tetikasan-dahatsoratra ho an'ny Wikipedia. Rehefa eken-dry zareo ny lahatsoratrao, dia averin'ny vondrona foibe any Maosko dinihina indray avy eo.
Ksenia Selezeneva, mpandrindra ny Mandatehezana Virtoaly, ao amin'ny Dumam-panjakana. Sary : Instagram
Tsy nolazain'ny Parlemantan'ny Tanora Rosiana ny fomba hamatsiany io tetikasa goavana io, ary heverina hamoaka lahatsoratra 10.000 ilay fomba fanoratana lahatsoratra vaovao manano-sarotra ho an'ny Wikipedia – azon'ny rehetra atao amin'ny fombany- hatramin'ny volana septambra.
Nahoana ireo mpiandry vavahady rehetra ao amin'ilay fanentanana izay afaka manolotra tsaratsara kokoa, raha toa ka ny Parlemantan'ny tanora fotsiny — am-pahibemaso sy tsy misy resaka asam-birao — no mamporisika ireo olom-pirenena mirehareha amin'i Rosia mba hanoratra zavatra betsaka ao amin'ny Wikipedia ?
Ny valinteny fohy mety ho azo dia ny hoe ” fanarahamaso ny kalitao”, fa ny tena antony dia resaka politika, tsarain'ilay velakevitra ho an'ny mpanao gazety naharitra adiny iray tamin'ny 17 Febroary izany, rehefa nambaran'ny mpikarakara ny Mandatehezana Virtoaly.
Tao amin'io fotoana io, nisy tovovavy iray nitsangana ka nanontany izay fomba hanakanan'ilay fanentanana ” ireo hetsika liberaly samihafa toy ny ‘ The Fifth Column’ (ilay tsanganana fahadimy), izay mandiso ny vaovao ho an'ny olona ao amin'ny haino aman-jery sosialy.”
Fotoana hamirapiratan’i Viktor Vodolatsky, solombavambahoaka Domà sady lehiben'ny Cossakc izany :
Izay efa zatra nisotro tamin'ny barika maloto, feno ranom-potaka, dia tsy te-hifindra amin'ny barikanà rano madio avy amin'ny loharano mangatsakatsaka. Efa zatra izany ry zareo, ary efa niaina tamin'ny rano maloto. Araka izany manana ny vondrom-piarahamoniny ny ‘fifth column’, izay mamaky izay soratany. Ny asantsika izao dia ny manasa izay rehetra an'ny fifth amin'ny rano madio avy amin'ny loharano.
Araka ny ambaran'ny haban-tranonkalan'ny mpanohitra Rublacklist.net, tsy nahaliana loatra ireo tonian-dahatsoratry ny Wikipedia Rosiana ilay Mandatehezana Virtoaly, tamin'ny fanehoana hevitra hoe amin'ny ankapobeny dia iriana ny hetsika famoronana lahatsoratra betsaka, saingy izay rehetra voasoratra ka ahitàna fironana ara-politika dia ho esorin'ireo mpanaramaso izay mampihatra ny fitsipiky ny tsy fitanilàna sy ny famerenana tenin'olona ao amin'ilay haban-tranonkala.
Na toy inona ny fitavozavozan'ny fomba fiasan'ny Parlemantan'ny Tanora momba ny Wikipedia, dia angamba mbola fanatsaràna hatrany an'ilay didin'ny governemanta nolazain'ny Praiministra Dmitry Medvedev tamin'ny volana aogositra teo izany, fony izy nanangana vondron'asa mba handinika ny famoronana hala-tàhaka vaovao rehetra ny Wikipedia foronin'ny Rosiana rehetra.
Nikatso tamin'ny taona lasa ilay ezaka nataon'i Medvedev, ary afaka maneho ny fitantanana vaovao, somary mampihomehy aza, ny tari-dàlana momba ny fitiavan-tanindrazana nataon'ny governemanta Rosiana ao amin'ny tontolon'ny rakipahalalàna ao amin'ny aterineto ilay Mandatehezana Virtoaly.